Yaa ka Danbeeya Mooshinka xilka Qaadista Madaxweyne Farmaajo? (DAAWO VEDIO) – WIDHWIDH ONLINE
Yaa ka Danbeeya Mooshinka xilka Qaadista Madaxweyne Farmaajo? (DAAWO VEDIO)
Published: December 10, 201812:40 am
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh ayaa qaaday tallaabooyin aan hore loo arag oo lama filaan ah tan iyo intii uu Muqdisho ku soo laabtay Sabtidii 1-da Disember 2018.
Wuxuu galabta qabtay Mooshin xil ka qaadis ah oo ka dhan ah Madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo 92 xildhibaan ay ku saxiixan yihiin, kaasoo xaaladda kacsan ee siyaasadda dalka ka dhigaya mid aan xal lahayn oo muddo 48 saacadood ah gaartay heerkii ugu sareeyay.
Mooshinka ayaa hore u diyaarsanaa, waxaana sanadkii hore 2017 xilligan oo kale la doonayey in la geeyo Baarlamaanka, taasoo meesha ka baxday markii weerarka lagu qaaday Guriga C/raxmaan C/shakuur, iyadoo markaasina lagu eedeeyay Imaaraadka Carabta inay dhaqaalaha bixineysay.
Mooshinkan sanad jirka ah ayaa xildhibaannada saxiixay ay qaarkood xilal wasiiro hadda ka hayaan xukuumadda, qaarna ay ka baxeen baarlamaanka, laakiin waxaa dib loo habeeyay maalmihii ugu danbeeyay, iyadoo magacyada dib loo saxay si xaaladda hadda taagan loogu saleeyo.
Mooshinkan waxaa ka qeyb qaatay in xilligan uu soo baxo , iyadoo u sii kordhayey mucaaradka dowladda Farmaajo oo la timid dhaqan siyaasadeed cusub oo ah mid ku dhisan xasarad abuuris iyo dagaallo siyaasadeed oo ay la gashay maamul goboleedyada iyo cid walba oo rabitaankooda ka horjeeda, iyadoo ay ugu danbeysay faragelinta Doorashada K/Galbeed ee Soomaaliya, taasoo xaaladda uga sii dartay.
Yaa dagaalka geliyey Guddoomiye Mursal..?
Waa Su’aal adag oo xitaa madaxda markii hore xilkan ku taageeray ee wadatay sida madaxweynaha aanay jawaab sax ah u heli karin, laakiin Goobjooge.net ayaa ogaatay in Guddoomiye Mursal ay saameyn ku yeesheen dowlado shisheeye.
Guddoomiye Mursal iyo gacanyarihiisa C/qaadir Maxamed Nuur (Jaamac) ayaa dhowaan tegay dalka Qubrus-ta Turkiga, halkaasoo la sheegay inay kula kulmeen saraakiil ka tirsan sirdoonka UAE, wuxuuna sidoo Muqdisho kula kulmay safiirka Sacuudiga, taasoo shakiga laag qabo Guddoomiyaha sii xoojisay, heshiisyo la isku ogaana uga baxay Farmaajo.
Dhinaca kale xogta laga helay Guddoomiye Mursal ayaa sheegeysa inuu ka war helay qorshe isaga ka dhan ah oo lagu doonayey in xilka looga qaado ama lagu xiro, taasoo soo dedejisay inuu mooshinkan qabto.
Guddoomiye Mursal oo loo heystay nin ay wadato kooxda Madaxweyne Farmaajo waxay muujineysaa in siyaasiyiinta Soomalida aanay noqon karin dad la yeesho, waxayna cashar u dhigeysaa madaxda Soomaalida ee u arka in laaluush ku kasban karaan dadka. Xaaladan oo kale waxay qabsatay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh oo doorashadii 2018 u qaatay inuu lacag ku soo laaban karo.
Maxaa kasoo bixi kara..?
Waxaa aad u adag in Mooshin Madaxweyne loo helo sharciyad sax ah oo lagu meel mariyo xitaa haddii ay isku raacsan yihiin inta badan baarlamaanka Federaalka, iyadoo hore mooshin kan la mida oo laga keenay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh uu ku dhammaaday qoraallo sharciyeed lagu wareeray oo guddoomiye Jawaari soo saaray. Waxaan weli dalku lahayn Maxkamad dastuuri ah oo sharciyeyn karta waxyaabaha lagu eedeeyo madaxweynaha.
Mooshinkan ayaa macaashka siyaasadeed ee ugu weyni noqonkaraa in khalkhal la geliyo madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa, iyadoo taasihorseedi karto inay farahooda ka baxdo doorashada Maamulka K/Galbeed, islamarkaana dalku galo khalkhal siyaasadeed oo jiitama iyo mooshinno aan dhammaan.
Dhinaca kale Xildhibaan Cabdirisaaq Axmed Jirde oo kamid ah gudiga maaliyada ee golaha shacabka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday arima dhowr ah oo salka kuhayo khilaafka ka dhex taagan gudoomiyaha golaha shacabka, ku xigeenadiisa iyowaxa keenay mooshinka madaxweyne Farmaajo.
Weah oo sheegay in uu badalayo sharciga 'cunsurnimada ah' ee Liberia
Published: January 31, 20185:03 am
Wefdi Ka Socdo Dowladda Oo Ku Howlan Dejinta Xiisada Balad Xaawo (DAAWO SAWIRADA)
Published: January 2, 20182:09 pm